एनआरएनएको प्राथमिकतामा कृषि
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को कृषि प्रवद्र्धन समितिले नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगानी सुरु गरेको छ । एनआरएनएले तयार गरेको दस अर्ब रुपियाँको बजेटमध्ये मुख्य लगानी कृषिमा गरिरहेको छ । त्यसका लागि एनआरएनएको कृषि प्रवद्र्धन समितिले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयसँग मिलेर एक समिति गठन गरी सहकार्य अगाडि बढाएको छ । प्रस्तुत छ, कृषिका लागि एनआरएनएले कुनकुन क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ, अगामी योजना के छ, लगानी कति छ भन्नेलगायतका विषयमा एनआरएनएका कृषि प्रवद्र्धन समितिका संयोजक एवं नेपाल सरकारसँग मिलेर गठन गरेको संयुक्त सहकार्य कृषि प्रवद्र्धन समितिका सहसंयोजक युवराज गुरुङ (बेल्जियम) सँग गोरखापत्रका लागि सुरेशकुमार यादवले गर्नुभएको कुराकानीः
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)ले नेपाल सरकारसँग मिलेर कृषिमा लगानी गर्दैछ, त्यसमा के के भइरहेको छ ?
हामीले नेपालको कृषिमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कृषि मन्त्रालयसँग छलफल ग¥यौँ । नेपालका कृषिविज्ञ र सरोकारवालाहरूसँगको छलफलपछि कृषि मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्नका लागि संयुक्त सहकार्य कृषि प्रवद्र्धन समिति गठन ग¥यौं । यो समितिले नेपालको कृषि क्षेत्रमा नीति निर्माणदेखि लिएर प्रविधि तथा लगानी भिœयाउनेसम्मको कार्य गरिरहेको छ ।
एनआरएनएले कृषिमा के के गर्ने योजना बनाएको छ ?
कृषि क्षेत्रमा काम गर्नका लागि हामीले चारवटा समिति बनाएका छौँ । एनआरएनको विज्ञता र दक्षताका आधारमा ती समिति बनाएका हौँं । इटलीमा रहनुभएका राम भण्डारीको संयोजकत्वमा अर्गानिक कृषिको विषयमा समिति बनाइएको छौँ । उहाँकै नेतृत्वमा कर्णली प्रदेशका सरकारसँग त्यहाँको कृषि क्षेत्रलाई कसरी अर्गानिक क्षेत्र बनाउने विषयमा छलफल गरी केही काम अगाडि बढाइसकिएको छ ।
अमेरिकामा रहनुभएका पिताम्बर दाहालको नेतृत्वमा कृषिबाट उत्पादन भएका वस्तुलाई कसरी भण्डारण, त्यसमा रहेका प्रोटिनयुक्त चिजलाई कसरी जोगाएर राख्न सकिन्छ त्यसको अध्ययन, प्रवद्र्धन तथा लगानीका लागि समिति बनेको छ । युकेमा रहनुभएका प्रकाश शर्माको नेतृत्वमा जडीबुटीलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ त्यसको विषयमा समिति बनेको छ । अमेरिकाकै तिलक भण्डारीको नेतृत्वमा प्राकृतिक रबर खेतीका बारेमा समिति बनाएको छ । केन्द्र र प्रदेशसँग मिलेर जहाँ खाली जग्गा छ त्यहाँ रबर खेती गर्ने योजना बनिरहेको छ । कुन मोडेलमा औद्योगिक रबर खेती गर्ने विषयमा छलफल गरेका छौँं । त्यसका बारेमा आजै मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउँछौँ । प्रदेश १ मा रबर खेती गर्ने तयारी करिब अन्तिम चरणमा नै पुगेको छ । त्यसबाहेक बृहत् कृषि बजार पनि बनाउने हाम्रो योजना छ ।
यसका लागि बजेटको योजना कति छ ?
रबर खेतीका लागि हामीले २० करोड रुपियाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेका छौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआर्ई)को कृषि उद्यम केन्द्र र एनआरएनको प्रवद्र्धन समितिबीच सहकार्य गर्ने सम्झौता पनि भइसकेको छ । पहिलो चरणमा प्रदेश १ का सरकारसँग मिलेर काम गर्ने तयारी गरेका छौँं । मुना आधुनिक कृषि बजारका लागि दुई अर्ब ४० करोड रुपियाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेका छौँ । यो प्रोजेक्ट सानो लगानीमा सञ्चालन ग¥यो भने यसले किसानको समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैन । सरकारले पनि सानो सानो लगानीमा कृषि बजारको स्थापना गरेको छ तर त्यहाँ न किसानको समस्या समाधान भएको छ, न व्यवसायीको न उपभोक्ताको । त्यसैले हामी कृषि बजारको सम्पूर्ण समस्या समाधान हुने गरी तयारीका साथ यसमा लगानी गरिरहेका छौँ । बजार राम्रो भएपछि उत्पादनलाई निश्चित गर्न सक्छ भन्ने निष्कर्ष हामीले निकालेका छौँ ।
चारवटामध्ये हालसम्म कुन कुन प्रोजेक्ट सञ्चालनमा आएका छन् ?
प्रदेश १ मा रबर खेतीका लागि लगानी गर्ने लगभग निश्चित भएको छ । प्रदेश १ का रबर खेतीका लागि दुई करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भइसकेको छ । यद्यपि, किसानले अहिलेसम्म बिरुवा पाएको छैन । बिरुवा बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ । बिरुवा उत्पादन गर्ने त्यस्तो प्रविधि यहाँ छैन । एउटा निजी क्षेत्रले बिरुवा उत्पादन गरेको छ तर त्यो एकदमै कम छ । किसानसँग भएको आफ्नो जग्गामा रबरको बिरुवा लगाइसके । अब उनीहरू अझै बृहत् रूपमा खेती गर्न चाहन्छन् । त्यसका लागि जग्गा खोजी भइरहेको छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेको तर उपयोग नभएको थुप्रै जग्गा छन् । यसका बारेमा छलफल भइरहेको छ ।
सरकारसँगको सहकार्यमा एनआरएनएको यो लगानी कस्तो खालको लगानी हो ?
एनआरएनएसँग पैसा हुँदैन । उसले लगानीका लागि आह्वान गर्छ । कुनै प्रोजेक्ट तयार भइसकेपछि त्यसका लागि लगानी गर्न विश्वभर छरेर रहेका नेपालीहरूका लागि आह्वान गरिन्छ । अनि रुचि राख्ने व्यक्तिहरूले आ–आफ्नो चाहनाअनुसार लगानी गर्छन् । पहिला पहिला सहयोगका लागि मात्र लगानी हुन्थ्यो तर अब हामीले व्यावसायिक रूपमा लगानी गर्दैछौँ । जुन व्यक्तिले जेका लागि लगानी गर्छ, त्यसको नाफा नोक्सानको जिम्मेवार उही हुन्छ । यद्यपि, यसको संयोजनकर्ता, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी प्रवद्र्धन समिति नै हुन्छ ।
कृषिमा विभिन्न परियोजना सञ्चालित छन् तर धेरैजसो सफल भएको छैन, अब एनआरएनएले गर्ने लगानी कति सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ ?
अरू कसको कुन परियोजना असफल भयो त्यतातिर म जान चाहन्न तर एनआरएनएले जहाँ जहाँ लगानी गरेको छ, सबैमा सफल भएको छ । र, यो कृषि क्षेत्रमा पनि सफल हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।
नेपालमा कृषिको सम्भावना कति देख्नुभएको छ ?
सम्भावना प्रचुर छ तर नीतिगत रूपमा केही अप्ठ्याराहरू छन् । जसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले कृषि उत्पादनलाई दोब्बर गर्ने लक्ष्य लिएको छ, त्यो पनि सम्भव छ तर त्यसका लागि कृषकको सङ्ख्या घटाएर प्रविधिमा जोड दिनुपर्छ । पछिल्लो समयमा कृषिमा युवाको आकर्षण बढ्नुका साथै ठूला घरानियाँ लगानीकर्ता पनि आकर्षित भएका छन् तर अहिले सरकार जुन तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ त्यसले उत्पादन दोब्बर गर्ने सम्भव छैन । नीति निर्माणमा सहयोग गर्नका लागि हामी मस्यौदा पनि तयार गरेका छौँ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौँ । अर्थात् सरकारबाट जस्तो सहयोग पाउनुपर्ने हो त्यो पाइरहेका छैनौँ । जिम्मेवारी लिई सकेपछि त्योअनुसार काम गर्नुपर्छ, त्यो भइरहेको छैन ।